Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu Yokwelashwa Kwamanzi Angcolile | Ukulingisa
Izingozi zamanzi angcolile: amanzi amdaka amakhemikhali abhekisela emanzini angcolile akhiqizwa ekukhiqizeni izitshalo zamakhemikhali, njengokukhiqizwa kwe-ethylene, i-polyethylene, i-raber, i-polyester, i-methanol, i-ethylene glycol, amapulazi ethangi likawoyela, ukuhlukaniswa komoya neziteshi ze-air compressor neminye imishini equkethe uwoyela wamanzi angcolile, ngemuva kokuthola ukwelashwa ngamakhemikhali, ngokuvamile kuhlangabezana namazinga kazwelonke wokukhishwa kwesibili. Ngenxa yokushoda kwemithombo yamanzi, amanzi ahlangabezana namazinga okukhipha adinga ukucutshungulwa ukuze athole ukwelashwa okuphezulu ukuhlangabezana nezidingo zokugcwaliswa kwamanzi ezimbonini. Main ukungcola izici: PH, SS, TP. Ukuchithwa kuzodala ukuthi umzimba wamanzi ube ne-asidi futhi umzimba wamanzi uzothinteka nge-eutrophication.
Ukwelashwa kwamanzi ukwelashwa kwamanzi angcolile ngokusebenzisa izindlela zomzimba, zamakhemikhali nezebhayoloji, ukuze kuhlanzwe amanzi angcolile, kunciphise ukungcola, futhi kufinyelele ekubuyiseleni amanzi angcolile, kusetshenziswe kabusha, futhi kusetshenziswe ngokuphelele imithombo yamanzi. Inkampani yethu inikezela ngesixazululo esihle kakhulu sokulungiswa kwamanzi emfucuza kuhlangene neminyaka eminingi yokuhlanzwa kwamanzi angcolile.
Uhlelo olujwayelekile lwendle lubandakanya ukuqoqwa, ukuhlukaniswa kukawoyela, ukufaka imithamo, imvula, ukugxilisa imvula nezinye izinqubo. Okokusebenza okulawulwayo ikakhulu kufaka phakathi amaphampu nama-valve, futhi iningi lemishini idinga ukulawulwa ngokuzenzakalela; izinsimbi eziqoqa imininingwane ikakhulu zifaka ileveli ketshezi, ukugeleza, i-PH kanye nokushisa. Ngokuvamile, ukunemba kolwazi oluqoqwe yimitha kuyadingeka ukuthi kube phezulu kakhulu, ikakhulukazi i-PH nokugeleza. Ukuhlaziywa kwekhwalithi yendle kungadlala indima ebalulekile ekwehliseni ukukhishwa kwendle. Ngakho-ke, uhlelo lokuthuthwa kwendle lunezidingo eziphakeme kakhulu zedatha yomlando.
Imishini edinga ukulawulwa ohlelweni lokuthuthwa kwendle ihlukaniswe ikakhulukazi ngezinhlobo ezimbili: amaphampu nama-valve. Ngokuya ngezidingo zesiza, ukulawulwa okwenziwe ngezandla nokuzenzekelayo kwamaphampu nama-valve esizeni kuyatholakala. Akuyona yonke imishini efakwe umsebenzi wokulawula othomathikhi; imishini yokulawula okuzenzakalelayo ifaka phakathi imisebenzi yokushintsha ezenzekelayo neyesandla. Lapho ushintshela ku-othomathikhi, imishini ibona ukuqala kokuxhuma nokuma ngokuya ngezinga le-liquid elihambisanayo. Ukuhlolwa okuhloliwe, ukuqala kochungechunge nokuma ngaphandle kokungasebenzi kahle, futhi okokusebenza kuhlangabezana nezimo ezizenzakalelayo, isikhathi sokwenza imishini sincane kakhulu.
Langaphambilini Imishini esebenza kahle yokwelashwa kwegesi edonsa kanzima yomlilo
Olandelayo: Kuvulwe umshini wekhabhoni ohlanganisiwe
Indawo Yokuhlanza Indle
Uhlelo Lokulashwa Kwamanzi Ukusingathwa
Izinsiza kusebenza zokwelashwa kwamanzi angcolile
Indawo Yokuhlanza Amanzi Angcolile